Izindaba - 20 Ubuchwepheshe Bokwakha Imaski Machine China Mask Production Speed ​​UP
Ukusuka ekwamukeleni iminikelo evela emazweni amaningi ukunikela ngezinto zokwelapha kwamanye amazwe. Esikhathini esifushane esingaphezu kwenyanga eyodwa, "okukodwa kokukodwa" kwamaski waseChina kukhombisa amandla amakhulu enziwe eChina futhi kuvuselela isivinini esisha sokukhiqizwa kwezinto zokwelapha.
Emasontweni ambalwa edlule inoveli ye-coronavirus pneumonia ibisesigabeni esibucayi eChina, futhi amazwe angaphezu kwama-20, kubandakanya iJapan, iSouth Korea nePakistan, abatakule.
Kusukela ngoMashi 2, sebengamazwe angama-62 kanye nezinhlangano zamazwe omhlaba ezi-7 ezinikele ngamaski, okokugqoka okuvikelayo kanye nezinye izinto zokuvimbela nokulawula ubhubhane ezidingeka ngokushesha eChina. IPhini likaNgqongqoshe Wezangaphandle uMa Zhaoxu uthe: "IPakistan ikhiphe izifihla-buso ezitokisini zeNational Hospital yazinikeza iChina."
Ngemuva kwemizamo engaphezu kwenyanga, umphumela wokulwa nobhubhane waseChina uyaphawuleka. Ngomhlaka 13, abengekho amacala amasha aqinisekisiwe ezifundazweni ezingama-27, izifunda ezizimele kanye namadolobha, lapho izifundazwe eziyi-19, izifunda ezizimele namadolobha zazingenamacala amasha izinsuku eziyi-14 zilandelana noma ngaphezulu. Ngisho nobhadane olubi kakhulu eWuhan sekuqinisekisiwe njengedijithi eyodwa izinsuku ezintathu zilandelana.
Namuhla, isimo sobhadane lomhlaba wonke senze izinguquko ezinkulu futhi isimo simuncu. I-Novel coronavirus pneumonia engaphandle kweChina inamacala amasha we-coronavirus pneumonia, kanti i-European Union isiphenduke isizinda sohlupho olusha lwe-pneumonia, kusho lowo. I-Novel coronavirus pneumonia yamenyezelwa ukuthi ingene "esimweni esiphuthumayo sombuso" futhi yaqala ama-dollar ayizigidi eziyizinkulungwane ezingama-50 ukubhekana nalolu bhubhane lomqhele olusha lomqhele.
Ebhekene nokusabalala komhlaba kwalesi sifo, iChina inikeze usizo eNingizimu Korea, eJapane, e-Iran nakwamanye amazwe ngokwamandla abo. Akugcinanga ngokuhlinzekwa ngemithi efana namaski, kodwa futhi wanamathisela izinkondlo ukufudumeza izinhliziyo zabantu.
UMnyango wezangaPhandle eChina uthe omakhelwane kufanele basizane lapho bebhekene nobunzima nezinselelo. I-China ayikazibeki izindlela zokulawula ukuhweba zamaski okuthumela impahla ngaphandle kanye nezinto zokusetshenziswa.
Njengamanje, i-Italy isayine inkontileka yokuthekelisa ngomkhiqizo wezokwelapha neChina, kanti iChina ithembise ukuthekelisa izifihla-buso eziyizigidi ezimbili, izingcezu zezingubo zokuzivikela ezingama-200000 kanye nezikiti zokuhlola ezingama-50000 e-Italy.
Ihhovisi labamele ezokuhweba e-US liphinde lamemezela ngomhla ka-13 ukuthi eminye imikhiqizo yezokwelapha engeniswe ivela eChina izokhishwa ohlwini lwama-tariff, kufaka phakathi amaski alahlwayo, imaski yezokwelapha elahlwayo, izembozo ze-stethoscope ezilahlwayo nezembozo zezicathulo ezilahlwayo.